Novambra 29, 2011 amin'ny 7:18 aho
Short kaody antso transposh Widget tsy miasa sy mahatonga mahafaty diso –
– Mahafaty fahadisoana: Antsoy ny tsy voafaritra fomba transposh_plugin_widget:: transposh_widget () in ny tsipika 407
Ahoana no fa nifidy ity? The whole site is not working after the update because of this error 🙁
Novambra 29, 2011 amin'ny 7:42 aho
Eny, ny bibikely – azafady hanoloana ny 407 tsipika amin'ny:
ary miezaka indray,
Mety ihany koa ho mahasoa ny mahafantatra fa afaka mandefa param izao mamaritra ny fijery ny plugin ao anatin'ny $instance miova
Novambra 29, 2011 amin'ny 10:10 aho
Misaotra anao! Eny izany debug fehezan-dalàna! Fa ankehitriny kosa, mampiseho listbox ary te-haneho saina. Ahoana no hanao izany ratsy mba sainam-pirenena no aseho.
Novambra 29, 2011 amin'ny 12:15 am
Koa satria Heveriko ianao miantso azy io toy ny:
Tokony izao hiantso izany zavatra toy ny:
Novambra 29, 2011 amin'ny 12:39 am
Novambra 29, 2011 amin'ny 12:45 am
Hi aho manana izany olana. Aiza no toerana 407 tsipika mba hahafahako manolo izany amin'ny fehezan-dalàna ambony debug azafady? Misaotra
Novambra 29, 2011 amin'ny 8:45 am
ny ao amin'ny transposh_widget.php ao amin'ny WP lahatahiry ny plugin, raha tsy afaka mitantana, mampiasa ny fifandraisana antsika hamorona ity toerana ary izahay handefa anareo ho raikitra Malagasy
Novambra 29, 2011 amin'ny 1:06 am
Misaotra, fa ny fomba namatrana CSS?
I mampiasa transposh_widget(Array(), Array('Lohateny’ => 'Translation', 'Widget_file’ => 'Sainam-pirenena / tpw_flags.php'));
Sainam-pirenena ankehitriny, na izany aza, tsy namatrana tpw_flags.css.
Novambra 29, 2011 amin'ny 11:43 am
Eny, izany dia mamitaka anjara,
misy fomba roa hiatrika izany, Ny iray dia hoe Izaho no mieritreritra ny fomba mba hanitsiana izany (clueless) ary ny iray hafa dia ny hanampy ny Widget ny Sidebar anao tsy haneho izay hanery ny koa ny CSS.
Fehezan-dalàna ity dia tena sarotra tokoa, satria izao no nanampy CSS (ary aggregates) mavitrika rehetra Widgets, ary tsy misy lalana ho fantatra ny antoka izay sidebars dia haneho izay pejy, dia mavitrika Widgets dia raisina.
fomba iray hafa dia ny hanery ny koa ny marina CSS ao amin'ny tena toerana marina ao amin'ny fampiharana ny pejy, izay midika hoe manampy ny hetsika amin'ny wp_print_scripts ary izay manome ny Widget kilasy add_transposh_widget_css … Mino aho fa izany dia ho be loatra ny asa, ka nandeha tamin'ny lalana hackerish tsy ratsy toy izany hevitra.
Novambra 29, 2011 amin'ny 9:55 aho
Misaotra noho ny asa ataonareo ho antsika.
Afaka nanazava hoe aiza no ahitana ny API FOTOTRA mba ampidiro eto ny plugin?
Novambra 29, 2011 amin'ny 12:08 am
Voalohany, Dia hanazava fa amin'izao fotoana izao dia tsy mila fanalahidy sy ny zava-drehetra dia miasa.
Afaka milaza aminareo aho fa ny fomba tsara indrindra hahitana ireo fanalahidy dia ny mampiasa ny fikarohana mba hahita azy ireo, fotsiny mitady “X nandika API Key” izay X no anarana ny toerana tena iray,
Aho tsy nandefa rohy mivantana, satria:
1. Mandrakariva izy ireo hanova ny URLs, ary aza misahirana vaovao farany na iza na iza, ka tsy te-ho avy hamitahana mpamaky
2. Aho Tsy hoe omena karama noho ny niresaka momba azy ireo, na manao Heveriko fa ilaina ny manao izany
Novambra 29, 2011 amin'ny 4:51 am
Tena be haingana kokoa, Arahabaina.
Na dia izany aza, Izaho dia manana olana mba hamorona ny Sitemap izay handinika ny fiteny rehetra. Moa ve ianao manana vahaolana ho an'ny olana ity?
Novambra 29, 2011 amin'ny 8:46 am
Misy damba azo Google XML Sitemaps plugin, ary ihany koa – Version 4 Beta izany Plugin tsy mila damba. Afaka mahita ny damba eo amin'ny Trac toerana
Novambra 29, 2011 amin'ny 11:10 am
dia tsaratsara kokoa ny miandry ny vaovao 0.81 Version ? raha tsy te-handamina disadisa manually ?
Novambra 29, 2011 amin'ny 11:25 am
Mampanantena aho dia hisy bibikely vaovao amin'ny 0.8.1 😉 but seriously, dia afaka manoratra ahy sy ho anareo aho ny nitampintampina Malagasy, na handamina disadisa izany ny tenanao. Koa – mpampiasa indrindra dia tsy mampiasa endri-javatra ity, izay mety ihany koa amin'ny alalan'ny fametrahana Hisolo ny Widget dika amin'ny fibaikoana, ary raha tokony nampidirinay ny Widget fehezan-dalàna mivantana, nampidirinay ny Sidebar…
Novambra 30, 2011 amin'ny 1:41 aho
Salama, voalohany indrindra fisaorana noho ny mahafinaritra plugin. Faharoa, araka ny vaovao farany aho tsy afaka hanova ny fandikan-teny. Rehefa clich ny bokotra Ovay ny pejy mandika miova amin'ny fomba fa tsy manana PopUp varavarankely mba ovaina. Afaka manampy ahy ve ianao?
Novambra 30, 2011 amin'ny 7:01 am
Mba mampiasa ny fifandraisana sy ny endrika izahay miasa aminao ao amin'ny nanamboatra ity, angamba ady vaovao amin'ny hafa Plugins
Novambra 30, 2011 amin'ny 9:44 am
Ezio, azonao mijery raha toa ka ny PopUp ankehitriny varavarankely mampiseho amin'ny faran'ny ny pejy tsy misy fomba?
Novambra 30, 2011 amin'ny 7:53 aho
Salama e. Aho nanitsy ny bibikely fa tsy afaka manova ny dropdown miverina any sainam-pirenena. Ve aho hanampy ny mari-pamantarana ambony ka hatrany ambany ny widget.php na rakitra hafa?
Novambra 30, 2011 amin'ny 7:00 am
Mila manova ny fehezan-dalàna izay antsoina hoe ny Widget, dia nanazava ambony
Novambra 30, 2011 amin'ny 9:59 aho
Salama, Vao nametraka ny vaovao Version 0.8.0, nefa ankehitriny tsy miasa intsony… ny hatao? misaotra!
Novambra 30, 2011 amin'ny 7:02 am
Mba andefaso olona antsika mivantana, ary izahay miezaka ny hanamboarana azy
Desambra 5, 2011 amin'ny 12:54 am
Noho ny fisian'ny ny ekipa: ho risolto il problema canbiando JQuery e lo script che lo collegava 🙂
Deborah Gamble milaza
Novambra 30, 2011 amin'ny 4:07 am
Transposh Tsy maneho araka ny tokony ho amin'ny dikan- 0.8.0 Misy ny vahaolana?
Novambra 30, 2011 amin'ny 7:05 am
Salama ny ao, Toa toy ny CSS olana, mifandray antsika mivantana ny hiasa amin'ny vahaolana
Glenn Newland milaza
Novambra 30, 2011 amin'ny 5:44 am
Greatful aho noho ny asa rehetra efa nataony ho any amin'ny famoahana vaovao, raha jerena ny fomba mafy ny Google krizy API mety ho hiatrehana tamin'ny voalohany. VITA TSARA!
Inona no tiako ho fantatra ny hoe ahoana no ahafahako antoka ny toerana no efa voatanisa ao amin'ny milina fikarohana iraisam-pirenena, amin'ny fiteny maro? Ny tiako hambara, noho ny transposh ny toerana amin'izao fotoana izao azo vakiana ao amin'ny 3 fiteny, fa dia ny hoe iray ihany toy ny hoe nisy “nampiantrano” amin'ny fiteny na thoe no mila manao zavatra (toy ny Cache pejy tsirairay na mamorona multisite?)
Misaotra famoahana vaovao, ary ny API vahaolana.
The Red Bisikileta
Novambra 30, 2011 amin'ny 7:08 am
Manana olana eo amin'ny toerana izay tsy mamela ny fikarohana mba hahita ny toerana, ny hiheveranao azy dia base de données olana, saingy mila fitiliana, mifandray aminay mivantana noho ny miasa amin'ny nanamboatra ity
Desambra 2, 2011 amin'ny 9:56 aho
OK Ofer, Efa Nifandray anao mivantana. Taty aoriana, Ihany koa aho nanaisotra nandrara: /index.php / * avy robots.txt rakitra. Angamba izao no fototry?
Desambra 2, 2011 amin'ny 10:06 aho
Aza, ny antony dia tsy ampy Database latabatra, Efa nosoratako ho anao mivantana momba ny olana amin'ny fomba hamahana azy io.
Desambra 1, 2011 amin'ny 12:38 aho
Great vaovao. Misy fomba fanaovana ny saina rehetra goavana? Izy ireo mijery Somary very eo amin'ny fotsy ambadika.
Misaotra Toy ny mahazatra.
Desambra 1, 2011 amin'ny 12:28 am
Tsy maintsy hahita saina sy hisolo toerana lehibe kokoa amin'izao fotoana izao ireo, na manoratra subwidget – jereo http://trac.transposh.org/wiki/WidgetWritingGuide
Desambra 1, 2011 amin'ny 6:01 aho
Plugin vaovao tapaka ny toerana rehefa avy fametrahana azy io amin'izao fotoana izao. I wish I had not upgraded because my entire site is down now if I enable the plugin 🙁
Desambra 1, 2011 amin'ny 12:25 am
Mba manandrana indray-fametrahana ny plugin avy wordpress.org, ny vahaolana ho breakage ho an'ny mpampiasa ny asa Widget dia napetraka, azonao atao koa ny manoratra antsika mivantana, ary izahay hanampy
Raha tsy izany milaza
Desambra 2, 2011 amin'ny 10:53 aho
Ovay Cant teny amin'ny Ver. 0.8, inona no olana?
Tamin'ny toerana ity http://www.wcafeasia.com efa nametraka ny plugin, nefa tsy afaka hanova misy andinin-teny amin'ny rehetra?
Efa iray hafa toerana miaraka amin'ny erlier Version izay miasa tsara, Manana toe-javatra toy izany koa usel amin'ny ity (0.8), fa cant Ovay.
Efa mampiditra à API key avy Google (ny navigateur)
Na iza na iza no mahalala?
Desambra 2, 2011 amin'ny 11:29 aho
Ny foto-kevitra no Loading ny jQuery1.3.2 (izay fahiny), manamboatra azy io, ary ho toy izany tena sambatra
Desambra 2, 2011 amin'ny 1:18 am
Misaotra valin-! Moa ve ianao manana hevitra ny fomba hanaovana izany?
Desambra 2, 2011 amin'ny 3:21 am
Hanova lohahevitra ankehitriny raki-daza mba hanala ny dia ahitana (angamba amin'ny lohapejy)
Delete ny rakitra mihitsy na manolo izany
Desambra 3, 2011 amin'ny 6:39 am
Re-fahefana .80 Version isaky ny toromarika, ary ny toerana mbola 100% torotoro raha mahatonga ny plugin.
Tenin 'ny fitandremana – tsy fametrahana io dikan-, dia mety handrava ny toerana toy izany no ahy.
I voafafa ny Plugin fampirimana, unzipped boky vaovao 0.80 ary mbola ny toerana rehetra mandeha kibony ny. Tsy misy mampiseho – , dia ho tonga navigateur lamba fotsy.
Desambra 4, 2011 amin'ny 8:19 aho
Manaiky aho, fametrahana tsy misy upgrades, ny zava-drehetra mba hanafoanako, fa ny teboka, mijery ny FAQ, izany no mety ho fahatsiarovana olana fetra, nefa tsy mba mahita antony tokony ho mifandray amin'ny upgrade.
Ankehitriny, raha maniry hatao voavaha ity olana ity, fifandraisana isika miezaka mivantana, dia tokony miezaka ny manampy. Indraindray isika dia tsy
Mandihy Sunny milaza
Desambra 4, 2011 amin'ny 6:25 aho
Ankihiben-tànany ny bandy!
No milalao ny plugin tanteraka noho ny tsy mbola!
Vitsy ny zavatra mba hanazavana:
1. Azonao hazavaina azafady ny fomba manampy nadika pejy mba Sitemap? (Tsy mahazo izany rehefa nilaza momba izany tao amin'ny fanehoan-kevitra teo aloha).
2. Ity ekena amin'ny WP Super Cache?
Desambra 7, 2011 amin'ny 1:11 aho
1. Ny valiny dia ao amin'ny FAQ sy eo amin'ny serasera toerana (http://trac.transposh.org)
2. Eny, tena toy izany
Desambra 4, 2011 amin'ny 10:28 aho
Voalohany, aoka aho hoe, ianao manana plugin lehibe. Izaho ao amin'ny Etazonia, miasa amin'ny lahatahiry toerana ao Maraoka. Ny Default teny eo amin'ny toerana dia frantsay. Tany an-toerana, orinasa afaka manampy ny lisitra ao amin'ny lahatahiry (Standard karazana lahatsoratra) mampiasa fiteny hafa. Ohatra raha misy orinasa no hanampy ny lisitra amin'ny teny Anglisy, ny plugin dia handika ny lahatsoratra (lisitra) ho any rehetra ny mavitrika fiteny, afa-tsy ny Default teny (satria mino fa frantsay?). Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny dikan-teny anglisy sy ny frantsay dia samy marina iray ihany Malagasy version. Ny tranonkala tompon'ny te rehetra ny lahatsoratra maneho ao amin'ny Default teny; ary ho hita eo amin'ny tsirairay avy amin'ny teny mavitrika. Misy ny shortcode ho entiny mandrarirary ny lisitra iray manontolo ao amin'ny, dia toy izany no anehoana ao amin'ny Default teny? (ohatra: [TP nandika ="en"]Salama[/TP] ary dia haneho Bonjour. Na, misy fomba hafa mba hanatanterahana izany?
Desambra 6, 2011 amin'ny 3:02 aho
Moa olona manana izany olana?
Tsy handika intsony
Desambra 7, 2011 amin'ny 1:10 aho
Raha mbola manana olana, Aza misalasala mampiasa ny fifandraisana endrika izany toerana, ary izahay hanao ny tsara indrindra mba hanampiana
Desambra 6, 2011 amin'ny 5:23 aho
Tsara, I didnt mandre na inona na inona indray. Na izany aza, Izaho dia mahatakatra ny fomba hanatanterahana izay te ho afaka hanao. Fonosy fotsiny ny votoaty ao amin'ny DIV tenifototra miaraka amin'ny kilasy mylang.
Koa, FWIW, fa na iza na iza mijery amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra na inona na inona fanazavana momba na tsia plugin io dia nandika lahatsoratra fanao karazana. Na dia ny plugin tsy manaiky ny foto-kevitra ny fomba amam-panao karazana lahatsoratra, dia afaka hiova finoana ny plugin miasa amin'ny lahatsoratra fanao karazana, somary haingana. Mila hanova roa rakitra. Mila ny hanova ny on_ajax_tp_translate_all() asa in transposh_admin.php sy ny on_admin_menu() asa, in transposh_postpublish.php.
Desambra 6, 2011 amin'ny 4:12 am
Ny fotoana voalohany mampiasa izany，Fihetseham-po dia lehibe plug-in。
Fa，Aho manana olana amin'izao fotoana izao，
Rehefa avy mametraka，Pejy rehetra niseho：
Wrong 330 (harato::ERR_CONTENT_DECODING_FAILED)
Ahoana no nanamboatra azy?
Desambra 7, 2011 amin'ny 1:08 aho
Ny vinavina dia ho olana amin'ny fitadidiana, na roa gzipping olana
Stacy & James milaza
Desambra 6, 2011 amin'ny 5:55 am
Misaotra an-tapitrisany Ofer noho ny fizarana ny tetikasa.
Ankoatra ny mahitsy fandikan-teny io no manaiky MULTI-teny sehatra raha mihoatra noho ny 1 Default teny ampiasaina ao amin'ny sehatra.
Misaotra ihany koa ny fanampiana manokana ho an'ny troubleshooting kely izahay.
Desambra 7, 2011 amin'ny 9:49 aho
Salama，Aho mbola mitady vahaolana amin'ny zava-manahirana。
“Izahay tsy afaka mahita ny nanohana in-fitadidiana caching maotera, fametrahana misy afaka hanatsara ny zava-bitany. Jereo Transposh FAQs”
Aho handeha tsy miraharaha izany，Na izany aza tsy maintsy miatrika izany vao afaka miasa mora?
Other，Aho amin'izao fotoana izao mampiasa raikitra sehatra URL dia numerical raikipohy，ohatra：Sokajy://www.wukungfu.com/archives/123
Toy izany URL napetraka ho vokatr'izany eo amintsika?
Tsy andrinay ny haingana mampiasa ~ Misaotra anao noho ny fanampianao
Desambra 7, 2011 amin'ny 12:02 am
To ny fanontaniana:
1. Afaka soa aman-tsara tsy miraharaha fampitandremana ity, izany ihany no momba fampisehoana, ny plugin dia hiasa tsy misy izany
2. Ny rafitra permalink dia ho foana.
Desambra 7, 2011 amin'ny 1:09 am
Dia nakatona ny gzip voavaha ^^。
Ary soa aman-tsara misokatra-tsipiriany，
Fa izaho tsy mahita toa anao fitaovana fandikan-teny ao amin'ny Sidebar，
Ahoana no hanaovana-tsipiriany-in ao amin'ny fibaikoana?
Misaotra anao，Mahatsapa haingana fahombiazana! ^^
Desambra 7, 2011 amin'ny 1:28 am
Mba hametraka ny plugin ao amin'ny Sidebar, modia any an-tarehy sy sakafo hisintona ny transposh Widget ho amin'ny fibaikoana, mifidy ny Widget fomba tianao sy ny anaram-boninahitra ary izany no izy
Desambra 7, 2011 amin'ny 1:26 am
Backstage hitako teo mba hameno：
No halehako izay lafiny amin'ny fangatahana API MSN amin'ny Google API?
Misaotra anao noho ny mbola fanampiana ^^
Desambra 7, 2011 amin'ny 1:30 am
Afaka manampy azy ireo raha tianao, manaraka toromarika eo amin'ny toerana tsara, fa tsy Ary izao no ilaina
Desambra 7, 2011 amin'ny 2:02 am
Misaotra anao，Afaka mampiseho farany。
Na izany aza，Nahoana aho no mifidy teny hafa (ohatra,：anglisy)，Pejy tsy voadika mbola?
Misaotra anao noho ny fanampianao ^^ mafy
Desambra 7, 2011 amin'ny 2:24 am
Izany dia satria ny foto-kevitra no tena antitra Loading jQuery (1.3.2), ka hanova izany sy hevero fa dia miasa
Desambra 7, 2011 amin'ny 2:27 am
I fotsiny-tsipiriany-hisintona ny Sidebar，
Nahazatra ahy ny manana ny solosaina dia afaka mijery，
Fa ny hafa amin'ny fampiasana solosaina Shique tsy mahita。
Fa nahoana izany?
Miala tsiny，Maro dia maro ny olana -
Desambra 7, 2011 amin'ny 3:38 am
Sambatra ….mahazo izany mba miasa …
Asa lehibe Ofer…
Desambra 8, 2011 amin'ny 2:11 am
Ho menamenatra，Afaka ianao dia mba ampio aho mba hahita ny pejy Inona no olana?
Fa jQuery，Efa kely zatra。
Enable-tsipiriany-in izao，fa Page、Article dia tsy tanteraka fandikan-teny，
Desambra 11, 2011 amin'ny 1:24 aho
Ny sehatra aloha sy aorian'ny bolded teny manjavona any amin'ny dikantenin'i.
Inona io eto?
Desambra 11, 2011 amin'ny 1:28 aho
tsara, Mino aho fa mampiasa ny mafy tenifototra fa tsy ny sahy
Desambra 12, 2011 amin'ny 1:33 aho
I tena Heveriko fa tokony hiasa tsara, tsy misy antony tsy tokony, azafady manome URL izay tsy
Desambra 12, 2011 amin'ny 8:22 am
Azonao jerena ao amin'ny http://intl.relatividad.org/pt/relatividade/albert-einstein-biografia-e-obras/
ary tamin'ny tany rehetra voadika pejy izay ny voalohany “mahery” teny marina dia miaraka amin'ny fahadisoana, fa amin'ny
Desambra 13, 2011 amin'ny 10:26 aho
Te-hanohy hampiasa ny lehibe plugin, fa izao mampandeha ny lohamilina amin'ny be loatra.
I Nametraka memcached sy W3 Total Cache (ihany no afaka Database cache), fa ny vokatra no mandiso fanantenana.
Raha Transposh mavitrika amin'ny bilaogy manana 7.000 Lahatsoratra, izany irery no ampy ho hidona ny CPU.
Desambra 29, 2011 amin'ny 11:59 aho
inona no ny lohamilina specs ny teti-bola lohamilina famohana 3 vohikala goavana amin'ny 20K lahatsoratra tsirairay amin'ny transposh fahefana. Angamba manandrana ny mifamadika fanomezam-pahefana toy ny Nginx?